Indawo yokuhlala enqabileyo, iimbono zolwandle, ulwandle lwabucala - I-Airbnb
Indawo yokuhlala enqabileyo, iimbono zolwandle, ulwandle lwabucala
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguAlan & Wendy
UAlan & Wendy yi-Superhost
I-Table House ibonelela ngendawo yokuhlala etofotofo kwifama entle ephambi kolwandle ngaphandle nje kwe-Wynyard eMntla Ntshona eTasmania. Ngeendawo ezinkulu ngaphakathi nangaphandle yayiyilwe ngokukodwa ukuhlalisa izibini okanye iintsapho ezihlanganisana kunye ngezihlandlo ezikhethekileyo. Yonwabela iimbono ezimangalisayo ukusuka kwigumbi ngalinye, amagumbi okulala okumkani amane aneen-suite, ipanorama engama-360 ukusuka kwinqaba kunye nokufikelela okukhethekileyo kulwandle oluhle. Zibone ekuphumeni kwelanga okumangalisayo kunye nokutshona kwelanga, iitriliyoni zeenkwenkwezi kunye nentwasahlobo ekufutshane namasimi e-tulips.
Ngokufana nehotele ye-boutique kunendlu, kukho indawo entle kakhulu enendawo yokuhlala enkulu kunye neendawo zokutyela, intendelezo yangaphakathi evulekileyo kunye negumbi lokuphumla elikwinqaba (indawo egqibeleleyo yokubuyela 'yeyure yolonwabo' ukutshona kwelanga).
Kukho amaphiko amane ahlukeneyo okulala kunye negumbi lokuhlambela, nganye ineebhedi ezinkulu, enye enokuguqulwa ibe ziibhedi ezimbini ezingatshatanga. (Buza malunga neebhedi ezongezelelweyo zabantwana.)
Ikhitshi labapheki ligcwele izinto eziyimfuneko kwaye wamkelekile ukuba usebenzise imveliso yamaxesha onyaka entsha evela kwigadi yasekhitshini. Okanye ukuba ukhetha ukuthotywa, singalungiselela umpheki wasekhaya ukuba akuphekele. Yidla phambi komlilo ogqumayo okanye phantsi kweetriliyoni zeenkwenkwezi ezisentendelezweni.
Obunye ubutofotofo bubandakanya indawo yokuhlamba exhobe ngokupheleleyo, amagumbi amabini omgubo, ithala leencwadi, ukufudumeza kakuhle, iNetflix, iDVD, inkqubo yesandi edibeneyo kubandakanya unxibelelwano lokudlala umculo kwisixhobo sakho, kunye neWi-Fi yasimahla.
Imozulu kuMntla-Ntshona weTasmania ngokuqhelekileyo ipholile kunezinye iindawo zaseTasmania. Inokuba yindle kwaye ivuthe ngamanye amaxesha (inqaba yindawo efanelekileyo yokubukela izaqhwithi zisuka elwandle), kodwa ngezinye iintsuku yindawo yokuzola ngokupheleleyo. Indlu ihonjiswe kabini ngokufudumeza okuphakathi, ngoko ishushu kakhulu nasebunzulu bobusika.
Iintsuku eziyi-7 e Table Cape
IFama yeTafile House ibekwe kwiTheyibhile yeKapa eneempawu ezininzi kwiincwadi zekofu kunye neencwadana zokhenketho eTasmania. Ngentwasahlobo ngakumbi, iFama yeTable Tulip enomtsalane yimecca kubakhenkethi kunye nabafoti.
Zininzi iindawo zokuphonononga kunye nohambo olumnandi lwemini ukusuka kwiTheyibhile eKapa. Hamba nomkhokeli wasekhaya kwaye ubukele iintsomi zoonombombiya zingena zivela elwandle ukutshona kwelanga. I-Boat Harbour Beach (ivotelwe enye yeelwandle eziphezulu ze-10 e-Australia yi-Australian Geographic 2017) ingaphantsi kwemizuzu eyi-15; uLwandle olude, olumhlophe, olucocekileyo olunechibi labantwana (imizuzu engama-20); iDip Falls emangalisayo (imizuzu engama-40); Imbali yaseStanley, ilali endala enomtsalane yokuloba eboniswe kwifilimu ethi "Ukukhanya phakathi kweeLwandle" (imizuzu engama-45). Ukusuka apho hamba okanye uthathe i-chairlift ukuya kwi-Nut kwaye wenze i-40 yemizuzu eyoyikisayo ukuhamba ujikeleze phezulu; I-Wings Wildlife Park enezilwanyana ezininzi zemveli zaseTasmanian zithandwa ngabantwana (iyure enye ¼); Emu Valley Rhododendron Garden (35 imizuzu); ISidiliya saseBarringwood kunye neCafe Yomnyango weSela (iiyure ezi-1); kunye neCradle Mountain, enye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi zaseTasmania luhambo olulula losuku ukuba uqalise kwangoko (ngaphantsi kweeyure ezi-2).
Ukuba ukhenketha, kukho umgama omde ukusuka eSisters Beach, ngaphaya kweSisters Hills ukuya eAnniversary Bay (mhlawumbi 1 ½ iiyure zokubuya), ufikeleleka kuphela ngeenyawo okanye ngesikhephe.
Kukho iGalari yoCwangciso lwabaSebenzi enemisebenzi yamagcisa okudala asekuhlaleni (imizuzu engama-25) kunye neBurnie Art Gallery (imizuzu engama-30). I-Hellyer Whisky Factory (imizuzu engama-40) ifanelekile ukutyelelwa kunye nendawo enhle yesidlo sasemini.
Isikhululo seenqwelomoya saseBurnie/Wynyard, kunye nedolophu encinci ekhulayo yaseWynyard apho unokuthenga khona izinto, zikumizuzu emi-5 kude.
Umbuki zindwendwe ngu- Alan & Wendy
Having raised a family of travellers and now retired - Alan from an international construction management company which he co-founded, and Wendy from her job as a television journalist - we moved from Sydney to our farm in Tasmania which we've owned for 30 years.
We have travelled the world, from the Faroe Islands to Antarctica and most places in between. Our children and grandchildren are now spread across the globe - a great reason to keep travelling. We like to stay in unusual places off the beaten track (much like our place in Tassie) and love it when we get to meet some locals. We are a very friendly, easy going family and love to welcome people from anywhere.
Thina, abanini, sihlala kwindlwana encinci kwipropathi ngoko siyafumaneka ukuze sincede ngeengcebiso malunga nezinto ezinomtsalane zalapha ekhaya, iindawo zokutyela kunye nezinto ekufuneka zenziwe. ubumfihlo bakho buqinisekisiwe. Njengoko iyifama esebenzayo unokusibona ngamaxesha athile emini kodwa asinakuze sihlasele indawo yakho.
Thina, abanini, sihlala kwindlwana encinci kwipropathi ngoko siyafumaneka ukuze sincede ngeengcebiso malunga nezinto ezinomtsalane zalapha ekhaya, iindawo zokutyela kunye nezinto e…